Famolavolana tranonkala mamaly | Martech Zone
Famolavolana tranonkala mamaly
Alakamisy, Aogositra 2, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Ok, efa antitra aho ka mahatadidy an'io fa mety tsy ho vitanareo rangahy. Tadidinao ve ny fotoana nahafahantsika nanamboatra fiara? Fitaovana Sears tsara ary tsara handeha izahay… mila lamba rovitra sy hozatra fotsiny ary afaka mamaha olana amin'ny fiara fotsiny ianao. Tsy izay intsony. Tsy azoko intsony ny fomba hanokafana ny hood amin'ny fiarako.
Raha mijery aho famolavolana tranonkala mahaliana, Manomboka mahazo izany fahatsapana izany aho. Omeo ahy HTML, CSS, ary jQuery ary zazalahy faly aho. Fa atombohy ny manapaka sy mandika pejy iray mba hahafahany mihetsika amin'ny sakan'ny fitaovana ary tena manomboka misavoritaka aho. Io dia rehefa ataoko ampidirina am-panajana fotsiny ilay mpanamboatra anay ary mandroso bebe kokoa aho… diso .. zavatra manan-danja (toy ny ady hevitra amin'ny olona amin'ny Facebook).
Tsy amidy amin'ny famolavolana mamaly tanteraka aho satria tsy azoko antoka fa zavatra tadiavin'ny olona fotsiny izany hifanaraka amin'ny fitaovana hafa. Te hanana iPad aho izay misy fampiasa manararaotra ny fikosehana sy ny fanaovana zoom. Te hanana ny traikefako amin'ny finday aho hamela ahy hisosa sy hikosoka ny zavatra hitety sy hizaha mora foana. Tsy haiko fa ny singa sy ny fizarana fitetezana mitovy dia tokony ampiharina amin'ny fitaovana tsirairay. Tiako ny zavatra niainan'ny fitaovana tsirairay sy ny fitiavana rehefa manangana traikefa mifanentana amin'ny tranokala iray.
Na izany na tsy izany… hiala ny tongotro aho. Ity misy infographic tsara avy amin'ny TemplateMonster amin'ny famolavolana tranonkala mahaliana. Ary raha tena te hahita zavatra mahafinaritra ianao… kitiho ny azy ireo mamaly, interographic infographic ho an'ny fanandramana mangatsiaka kokoa aza.
Tags: manaikytranonkala mamalyfamolavolana tranonkala mahalianatemplatemonster
Fomba famoronana sary famantarana sy aingam-panahy
Fanandramana Google ao amin'ny Google Analytics… Meh